Ahoana ny fametrahana KDE Plasma Desktop amin'ny Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Miorina amin'ny Debian
Miorina amin'ny RHEL
Ahoana ny fametrahana KDE Plasma Desktop amin'ny Rocky Linux 8
Alakamisy 18, 2021 by Joshua James
Fanavaozana ny Operating System
Fanamarihana manan-danja alohan'ny fametrahana
Mametraka EPEL & Raven Repository
Alefaso ny Power Tools Repository
Mametraka KDE Plasma amin'ny Rocky Linux
Fijerena voalohany sy fanamarinana KDE Plasma Desktop
Hevitra sy fehin-kevitra
Ny anarana KDE avy amin'ny "K Desktop Environment." Ho an'ireo izay tsy mahafantatra ny KDE Desktop dia tontolo desktop malalaka malalaka izy io. Izy io dia manome ireo mpampiasa Linux amin'ny fizarana isan-karazany ny interface an-tsary hafa hanamboarana ny tontolon'ny desktop sy ny fampiharana ho an'ny fanatsarana ny fampiasana andavanandro.
Amin'ny tranga Rocky Linux dia Gnome ity. Ankoatra ny fanatsarana sy ny fiovana ara-tsary, tontolo maivana, haingana, malefaka miaraka amin'ny fampisehoana ambony kokoa izy io raha ampitahaina amin'ny biraon'ny teratany nalefa miaraka amin'ny Linux Distributions sasany.
Ao amin'ny lesona manaraka dia ho nianatra ianao Ahoana ny fametrahana KDE Desktop Environment amin'ny rafitra fiasanao Rocky Linux 8.
OS naroso: Rocky Linux 8.+.
Kaonty mpampiasa: Kaonty mpampiasa misy fidirana sudo na root.
ilaina: Internet Connection
Update your Linux Rocky rafitra fiasana mba hahazoana antoka fa ny fonosana rehetra efa misy dia tsy misy farany:
Ny lesona dia hampiasa ny baiko sudo ary raha heverinao fa manana sata sudo ianao.
Raha hanamarina ny sata sudo amin'ny kaontinao:
Ohatra vokatra mampiseho ny sata sudo:
Raha hanangana kaonty sudo efa misy na vaovao dia tsidiho ny lesonay momba ny Ahoana ny fomba hanampiana mpampiasa amin'ny Sudoers amin'ny Rocky Linux.
To use the kaonty faka, ampiasao ity baiko manaraka ity miaraka amin'ny tenimiafina fototra hidirana.
Alohan'ny hametrahana ny biraon'ny KDE dia mamorona backups na drafitra raha tsy tianao izany ary te hiverina. Ny fanesorana ny tontolo Desktop rehetra dia mikorontana ary hitarika amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fampiharana kisendrasendra mbola napetraka. Amin'ny ankapobeny, dingana mandreraka ny fiverenana amin'ny fanjakana voalohany alohan'ny hametrahana ny fonosana, indrindra ho an'ny mpampiasa vaovao sy antonony.
Raha tsy manana loharanon-drafitra kely ianao dia tsy hanakana ny rafitrao ny fananana tontolo desktop maro. Matetika ny olona dia manana maromaro ary mifamadika eo anelanelany.
Ny asa voalohany dia ny fametrahana ny Raven Repository sy ny EPEL (Package fanampiny ho an'ny Enterprise Linux) repository. Ny fonosana tahiry EPEL dia tazonin'ny Red Hat Enterprise (RHEL). Na izany aza, tsy ny fiankinan-doha rehetra no havaozina. Ny tahiry Raven dia ilaina mba ahafahana mametraka fonosana manokana, aseho amin'ny lalana.
Amin'ny fotoana maharitra, ity dia azo esorina na tazonina rehefa nohavaozina ny EPEL ho an'ny RHEL 8.5 satria tsy ampy amin'ny fotoanan'ity lesona ity momba ny breeze-gtk-common fonosana. Na izany aza, ny tahiry an'i Raven dia misy fonosana vitsivitsy nohavaozina toy ny nano text editor sy ny fonosana hafa, ka mety ho mendrika ny hitazona izany.
Sokafy ny terminal anao, ary ampiasao ity baiko manaraka ity izay hametraka ny tahiry EPEL sy Raven.
Type Y, avy eo tsindrio ny ENTER KEY hanohy amin'ny fametrahana.
Manaraka, hamafiso ireo vondrona fonosana misy izay hita ao amin'ny rafitrao.
Manaraka, apetraho ary avelao ny tahiry breeze-gtk-common fonosana.
Mandritra ny fametrahana dia hasaina ianao hanafatra ny lakile GPG ho an'ny tahiry Raven.
Type Y, avy eo tsindrio ny ENTER KEY hanohizana sy hamita ny fametrahana.
Ny asa faharoa alohan'ny hametrahana KDE Plasma dia ny mamela ny fitahirizana fitaovana herinaratra. Izany dia mamela ny fampiasana ny fitaovana fitantanana fonosana Linux mahazatra anao, yum ho an'ny Red Hat Enterprise Linux sy zypper ho an'ny SUSE Linux Enterprise Server, hametraka ho azy ireo fonosana ilainao amin'ny filaharana takian'ny rafitra.
Ao amin'ny terminal anao, kopia ary ampiasao ity baiko manaraka ity.
Manaraka, hamafiso fa alefa ny tahiry amin'ny fampiasana ny dnf relist baiko.
Tohizo amin'ny ampahany manaraka amin'ny fampianarana ary apetraho KDE Plasma.
Miaraka amin'ireo tahiry ilaina apetraka dia afaka manomboka mametraka ny birao hafa ho an'ny rafitra Rocky Linux 8 ianao.
Voalohany, ao amin'ny terminalo, ataovy azo antoka fa misy ny KDE.
Tohizo ny fametrahana KDE Plasma.
Mandritra ny fametrahana dia hasaina ianao hanafatra ny lakile GPG ho an'ny tahiry EPEL.
Type Y, avy eo tsindrio ny ENTER KEY hamita ny fametrahana.
Tsy tokony haharitra ela ny fametrahana. Amin'ny fitaovana tranainy sy Internet voafetra dia mety haharitra minitra maromaro izany.
Manaraka, apetraho amin'ny sary ny rafitra kendrena default amin'ny alàlan'ny baiko etsy ambany.
Rehefa vita dia avereno indray ny rafitrao.
Rehefa naverinao indray ny biraonao dia ho tonga amin'ny efijery fidiranao ianao.
AZA MIDITRA MIHITSY.
Voalohany, mila manamarina ny tontolo desktop ianao. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny fipihana ny bokotra fanamafisana eo akaikin'ny bokotra fidirana.
Farany, mifidiana “Plasma (Wayland)” na “Plasma (X11)” fa tsy ny default "Standard (Wayland display server)."
Marihina fa nisafidy ny Plasma Wayland ny fampianarana hanandrana azy io, ary tsy nisy olana nandritra ny fitsapana.
Raha vao tafiditra ianao dia hahita fiovana vitsivitsy amin'ny UI ankoatry ny fiovan'ny loko sy ny fiaviana. Ny taskbar izao dia mitovy amin'ny karazana taskbar windows bebe kokoa, miaraka amin'ny fampidirana bebe kokoa amin'ny zoro ambany havia sy havanana amin'ny serivisy misy ny fampisehoana fotoana.
Mba hanamafisana ny fametrahana, ny fonosana mora apetraka dia Neofetch, ary izany dia tonga ao amin'ny tahiry EPEL izay napetrakao teo aloha.
Mba hametrahana ity fonosana ity dia ampiasao ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal anao.
Raha vao tafapetraka dia ataovy ao amin'ny terminal anao ity baiko manaraka ity.
Ao amin'ny lesona dia nianatra ny fomba fametrahana KDE Plasma Desktop Environment ianao. Amin'ny ankapobeny, KDE dia tetikasam-piarahamonina lehibe ho an'ireo izay maniry mafy orina kokoa sy mety tsara ho an'ireo izay te-hahazo tombony betsaka amin'ny biraony, solosaina findainy ary netbook ary aleony ny metafora desktop mahazatra.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fampiasana KDE Plasma, tsidiho ny torolàlana momba ny antontan-taratasy ofisialy.
Sokajy Linux Rocky Tags KDE Plasma Desktop Environment, RockyLinux 8 Post Fikarohana
Ahoana ny fametrahana Xfce Desktop amin'ny AlmaLinux 8
Mametraka XanMod Kernel amin'ny Linux Mint 20.1/20.2/20.3
Asabotsy 4 Desambra 2021 amin'ny 5:14 maraina
Moa ve ny fomba tokana hanombohana ny KDE amin'ny fisafidianana azy ao amin'ny cog? Misy fomba hahazoana azy io ho an'ny mpampiasa rehetra ve?
Alarobia 8 Desambra 2021 amin'ny 6:03 maraina
Salama, Andrew misaotra tamin'ny hafatra.
Azo atao izany saingy mitaky fanakorontanana kely.
Tsy hevitra ratsy ny mampiditra zavatra toy ny script bash ao amin'ny torolalako ho an'ny olona izay mitaky azy io ho default ho an'ny mpampiasa lehibe kokoa, ary mila fotoana kely aho handaminana azy sy hizaha toetra azy araka ny tokony ho izy satria tsy nilaiko manokana ny hanao izany ho an'ny KDE, noho izany te hanandrana zavatra alohan'ny handefasana azy.
Momba ny LinuxCapable
Fanambarana politika momba ny fiainana manokana
© 2022 LinuxCapable ny zo rehetra voatokana.
Ny logo rehetra, ny marika ary ny marika voasoratra anarana dia fananan'ny tompony avy.
Ity tranonkala ity dia natao ho an'ny tanjona fanabeazana ihany. Tsy misy fiantohana na onitra omena ho an'ny fahaverezan'ny angona na fitaovana.